नेकपाको दुई तिहाईसामू सत्याग्रहीको पराजय ! – अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी)
नेकपाको दुई तिहाईसामू सत्याग्रहीको पराजय !
हो, कसैलाई हानी पुर्‍याएको कुरा भए त्यो जुनसुकै बेलामा पनि अवैध हुन सक्छ । तर, हजारौंलाई फाइदा पुर्‍याइरहेको सेवालाई अवैध भनिदिँदा हामी जस्ता देशभित्रै केही गर्छौं भनेर बसेका युवालाई पक्कै चित्त दुख्छ ।
यो ऐन आउँदा इन्टरनेटको जमाना नै शुरु भएको थिएन । अब हामीले नयाँ प्रयोग गर्‍यौं, प्रविधिको विकास हुँदै जाँदा त्यसलाई सहजिकरण गर्नेगरी कानुनहरु बन्नुपर्छ, परिमार्जन हुनुपर्छ । सरकारले प्रविधिको मर्मलाई बुझेर त्यसअनुरुपको नीति र नियम ल्याएन भने आविष्कार, उद्यम विस्तारै मर्दै जान्छ । हामी अहिले रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिइरहेका छौं । पब्लिकले यसलाई रुचाएका छन् । हामीसँग १० हजार जना त्यसै आवद्ध हुनु भएको हो र ?
ट्याक्सीभन्दा सुरक्षित छ टुटलनेकपाको दुई तिहाईसामू सत्याग्रहीको पराजय !